Xubno ka Tirsan Golaha Dhexe ee Ururka ONLF, Dhinacna oo Badqab ku Yimid Kenya – Rasaasa News
Xubno ka Tirsan Golaha Dhexe ee Ururka ONLF, Dhinacna oo Badqab ku Yimid Kenya
Nov 7, 2009 Dr. Dolal, ethiopia, Jwxo-shiil, ONLF
Maxamed Shariif oo ka tirsan golaha dhexe ee ururka ONLF, ayaa ahaa raga yar ee aan dhinacna raacsanayn labada garab ee uu u kala jabay ururka ONLF, waxaana uu in badan isku dayey in uu dhexdhexaadiyo masuuliyiinta labada garab ee ururka, nasiib daro waa uu ku guulaysan waayey.
Maxamed Shariif, waxaa uu ahaa dhalinyaradii ugu horeysay ee lagu bilaabay ciidamad ururka ONLF, waxaana lagu tiriyaa in uu yahay raga ugu cadcadaa ururka ONLF, gaar ahaan xubnaha ka hawl gali jiray gudaha dhulka Somalida Ogadeeniya taniyo sanadkii 1991.
Maxamed Shariif iyo Sheekh Deeq oo wali gudaha ku maqan, waxaa ay ka mid ahaayeen xubnihii soo galay gudaha dhulka Somalida Ogadeeniyo bishii January 2009, iyaga oo isku dayaya bal in ay wax ka qabtaan weraro ay ku hayeen ciidamo u gaar ah Jwxo-shiil, xubno sare oo ka tirsanaa golaha dhexe ee ururka ONLF oo uu horkacayey gudoomiyihii Gs-sare ee garabka ONLF, oo kolkii dambe lagu dilay Ogadeeniya. Maxamed Shariif waxaa uu aad isugu dhabar jabiyey in ayna dhicin wixii dhacay iyo waliba in uu ururku yeesho kulan si loo xaliyo khilaafka.
Hadaba, kolkii uu dhacay dilkii Dr. Dolal, waxaa uu muujiyey Maxamed Shariif cadho weyn oo uu u qaaday Jwxo-shiil iyo kooxdii la socotay, dabadeedna Jwxo-shiil waxaa uu amar ku bixiyey in la yeelo Maxamed Shariif sidii la yeelay Dr.Dolal. Maxamed Shariif iyo rag la socday waxay galeen duurka, ummana ayna suurto galin in ay dilaan ciidamada Jwxo-shiil xubinkaasi.
Maxamed Shariif, in badan waxa uu duurka ku jiraba, waxaa uu waa dhaw soo gaadhay dalka Kenya, waxaana dad uu la kulmay uu u sheegay in uu hayo xogo badan oo ku saabsan Jwxo-shiil iyo sida uu halganka iyo halgamayaashaba u baa,biyey. Maxamed Shariif waxaa kale oo uu sheegay “in ay dhacday dhibaato aad u weyn oo soo gaadhay halganka, dhibaatadaas oo aan kaga sheekayn doono kulan balaadhan”.
Maxamed Shariif waxaa uu sheegay in Eebahay badbaadiyey iyo dhulka oo uu aqoon weyn u lahaa uu ka badbaaday dil lala damacsanaa in loo gaysto, wuxuu yidhi “colaad ayaanu ku kala tagnay Maxamed Cumar Cismaan, wuxuuna amray in la idilo aniga iyo ragii kolkaas ila socdayba, aniguna ma badbaadiyeen hadii aan heli lahaa”. Waxaa uu sheegay in uu gudaha ku jiray 8 bilood oo xidhiidha intaasna uu dhuumasho ku jiray isaga oo ka dhuumanayey Jwxo-shiil iyo ciidamada gumaysiga Itobiya oo hadii ay helilahaayeen aan badbaadiyeen.
Waxaanu isku dayeynaa in aanu waraysi cod ah ka soo qabano Maxamed Shariif oo aanu idiin soo dayno, hadii ay noo suuro gasho.
Sahra Macalin oo Gabdho Absame ah u Goodiday!